ကိုယ့်မြေမဟုတ်တဲ့ နေရာတစ်ခုမှာ အနေကြာလာတာနဲ့အမျှ ဘယ်တော့ပြန်မှာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို
ခဏခဏ ဖြေရပါတယ်။ ကျွန်မ ဘယ်နေရာမှာပဲရောက်နေနေ
တတိယနေရာဆိုတာ ကျွန်မရဲ့ ပထမနေရာ ကျွန်မရဲ့အိမ် မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အသိတစ်ခုက အမြဲတမ်းခြောက်လှန့်နေခဲ့ပါတယ်။
ရောက်စတုန်းက ကြုံတွေ့ဘူးတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတွေကို ဘလော့ပေါ်မှာ ကျွန်မရဲ့ တတိယနေရာ ဆိုပြီး
ရေးခဲ့ဘူးပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ လေ့လာမှု အားနည်းတာရယ် ဗဟုသုတနည်းလွန်းတာကြောင့် အဲဒီပို့စ်လေးမှာ
ဒီနေရာလေးမှာ အနေကြာလာတာနဲ့အမျှ သွားရင်းလာရင်း မြင်ရကြားရ ခံစားရတာတွေက အရင်ကနဲ့စာရင်
သိသိသာသာ ခြားနားလာတာကို သတိထားမိပါတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားပြောဖြစ်တဲ့ အချိန်မှာလဲ သူတို့ဆီက ကြားရသိရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေက
ကျွန်မနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပြန်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်က တနေ့ရွှေ တနေ့ငွေဖြစ်နေတာမို့ ခေတ်စနစ် အပြောင်းအလဲတွေ အများကြီးကြားမှာ
ရှင်သန်ကြီးပြင်းခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လဲ ကျွန်မတို့ဟာ အပြောင်းအလဲတွေကြားမှာ လူဖြစ်လာခဲ့သူတွေလို့
နေပူကျဲကျဲမှာ သုံးလေးနာရီလောက် ခြေသလုံးတောင့်အောင် ရပ်လို့ အလံလေးတွေကိုင်ပြီး ဘဘဗိုလ်ချုပ်ကြီး
ဝင်တဲ့ အချိန်ကျပြန်တော့လဲ ဘဘကြီးတွေရဲ့ အိမ်နောက်ဖေးဝင်ပေါက်တွေအကြောင်း နားမဆံ့အောင်ကြားရပြန်ပါတယ်။
ဘဘကြီးရဲ့ ကိုယ်ရေးအရာရှိကတော်တွေကို အတွင်းခံကအစ လိုက်ဝယ်ပေးရတဲ့ ခရိုနီကြီးတွေကိုလဲ
ဘဘကြီးတွေတင်မကပဲ နယ်စပ်ဒေသက တန်ခိုးထွားလှတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိတွေကို သူတို့ ရန်ကုန်ရောက်ချိန်မှာ
လူမသိသူမသိ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်နဲ့ စီးတော်ယာဉ်စီစဉ်ပေးရတာမျိုး နေရာထိုင်ခင်း စီမံပေးရတာမျိုးတွေကို
ဂျိမ်းစ်ဘွန်းကားတွေထဲကလို လျှို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့ သဲထိတ်ရင်ဖိုလုပ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်တစ်ယောက် ဂေါက်ရိုက်ပြီးချိန်မှာ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ဒူးထောက်ထိုင်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကို
ဖိနပ်စီးပေးနေတာကို မျက်စိရှေ့မှာ မြင်ခဲ့ဘူးပါတယ်။
ကျွန်မတို့မြန်မာပြည်သူတွေထက် ဘယ်သူမှ ပိုလို့မသိနိုင်ပါဘူး။ အနောက်နိုင်ငံက သမ္မတတွေ
ဝန်ကြီးချုပ်တွေ ကိုယ့်ဖိနပ်ကိုယ်စီး ကိုယ့်ထမင်းကိုယ် တန်းစီစောင့်စားနေတာတွေကို မြင်ဖို့
သိဖို့ ပြတင်းပေါက်တွေ ပိတ်ထားတဲ့ အချိန်မို့ အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားတွေဟာ တကယ့် အခွင့်ထူးခံတွေလို့ပဲ
မိုးကောင်းကင် ကွာဟသလို အုပ်ချုပ်သူတွေနဲ့ ပြည်သူတွေ ဘဝက အကွာကြီး ကွာလှတယ်လို့ ထင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်
အရှေ့အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံတစ်ခုကိုရောက်လို့ အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားတွေကို ပြည်သူထဲမှာ
ထဲထဲဝင်ဝင်တွေ့လိုက်ရတော့ ဝမ်းသာဝမ်းနည်း ခံစားရသလို လေးစားအားကျတဲ့ စိတ်လေးလဲ ပေါ်လာပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နိုင်ငံလေးမှာ ပြည်နယ်တစ်ခုစီမှာ စော်ဘွားတစ်ယောက်စီ ရှိပါတယ်။ အခြားပြည်နယ်က
စော်ဘွားတစ်ယောက်ရဲ့ သမီးတစ်ယောက်ဟာ ကျွန်မတို့နဲ့တန်းတူ လေဆိပ်မှာ အလုပ်လာလုပ်တာကိုလဲ
တအံ့တသြတွေ့ရပါတယ်။ အမျိုးသမီးငယ်လေးမို့ သူအလုပ်လာချိန်မှာ အထိန်းတော်တွေ ပါပေမယ့်
သာမန်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်လို ရိုးရှင်းစွာ နေထိုင်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံလေးမှာ
အများပြည်သူသုံး မီးရထားပေါ်မှာ တွေ့ရတဲ့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင် စော်ဘွားကြီးကို ဘယ်သူကမှ
စော်ဘွားကြီး ကျန်းမာပါစေလို့ နှုတ်ခွန်းမဆက်ကြပါဘူး။
ကိုယ်တိုင်ကားမောင်းပြီး သွားရင်းလာရင်း လမ်းမှာတွေ့တဲ့ နိုင်ငံသားတွေကို အရေးတယူနဲ့
မွေးနေ့မှာ ဘယ်သူကမှ သတင်းစာထဲကနေ ဆုမွန်မချွေကြပါဘူး။ နိုင်ငံရဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်တွေမှာသာ
စော်ဘွားကြီးက ပြည်သူတွေကို ဖုန်းထဲကနေ မက်ဆေ့ခ်ျပို့ပြီး ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးတာပါ။
ခမ်းနားတဲ့ မင်းပွဲစိုးပွဲ ဧည့်ခံပွဲတွေ အခမ်းအနားတွေကို စော်ဘွားကြီးကိုယ်တိုင် ကြွရောက်ချီးမြင့်ပါသည်ဆိုတဲ့
သတင်းတွေထက် ကန္တာရထဲကိုသွားလည်တဲ့ ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကို အာရပ်ဘစ်လက်ဖက်ရည်နဲ့ တည်ခင်း
ဧည့်ခံနေတဲ့ စော်ဘွားကြီးရဲ့ သတင်းတွေကိုသာကျွန်မတို့ မြင်ခဲ့ရပါတယ်။
သာမန်ခရီးသွားတွေလို ခရီးသွားနေတဲ့ တော်ဝင်မိသားစုအနားမှာလည်း ဘယ်လုံခြုံရေးကိုမှ မတွေ့ရပါဘူး။
လမ်းတွေပေါ်မှာ အရေးပေါ်ဥသြသံတွေနဲ့ သွားလာနေတဲ့ လူကြီး ခရီးစဉ် ယာဉ်တန်းတွေကို ဘယ်တုန်းကမှ
ကတော် ဆေးရုံဆေးခန်းကို လာချိန်မှာ သူ့ကို မင်းသမီးရယ်လို့ မသိခဲ့တဲ့ ကျွန်မကိုယ်တိုင်
သာမန်ပြည်သူတစ်ယောက်လို့ ထင်ခဲ့မိပါသေးတယ်။ တွေ့သမျှ အမှုထမ်း ဝန်ထမ်းတွေကို ဝမ်းသာအဲလဲနဲ့
နှုတ်ခွန်းဆက်နေတဲ့ မင်းသမီးရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာ ပြည်သူတွေကို လေးစားချစ်ခင်ခြင်း အရိပ်တွေကိုပဲ
သားတွေသမီးတွေဟာ ကျွန်မတို့လိုပဲ ကော်ဖီဆိုင်တွေမှာ စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ တန်းစီစောင့်ဆိုင်းပြီး
အဖြစ်လေးတစ်ခုလဲ ရှိပါသေးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်လောက်တုန်းက တော်ဝင်မိသားစုဝင်တွေနေတဲ့
နန်းတော်တစ်ခုကို ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိနိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် စော်ဘွားရဲ့ တူဖြစ်တဲ့
စော်ဘွားတစ်ယောက်က ဖိတ်ကြားလို့ ကျွန်မနဲ့အတူ မြန်မာမိတ်ဆွေတချို့ စော်ဘွားရဲ့ နန်းတော်
ဦးဆောင်ပြီး လမ်းပြခဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေအမျိုးသမီးက ဧည့်ခန်းဆောင်နဲ့ နီးတဲ့ အိမ်တော်ရဲ့
အခြားဝင်ပေါက်တစ်ခုကနေ ခေါ်သွားတဲ့အတွက် ကျွန်မတို့ နန်းတော်ရဲ့ ပင်မ ဝင်ပေါက်ဆီကို
စော်ဘွားမိသားစုဝင်တွေဟာ သူတို့ကိုယ်ပိုင် နန်းတော်တွေနဲ့ သီးသီးသန့်သန့်နေကြပါတယ်။
ကျွန်မတို့ကို ဖိတ်ကြားတဲ့ စော်ဘွားရဲ့ နန်းတော်က လက်ရှိအုပ်ချုပ်သူစော်ဘွားရဲ့ ဒုတိယမြောက်
စော်ဘွားကတော် မင်းသမီးနေတဲ့ နန်းတော်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ ရှိပါတယ်။
အချိန်က ညကိုးနာရီလောက်ရှိပါပြီ။ ဒါပေမယ့် နန်းတော်တွေပတ်ပတ်လည်မှာ လက်နက်ကိုင်လုံခြုံရေးရယ်လို့
တစ်ယောက်မှ မရှိပါဘူး။ ကျွန်မတို့ကားတွေကို နန်းတော်နှစ်ခုကြားမှာ ရပ်ခဲ့ပြီး ပြန်လာတဲ့
အချိန်အထိ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ လုံခြုံရေး အစောင့်အကြပ်ရယ်လို့ တစ်ယောက်မှ မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။
ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ စော်ဘွားကတော့ ဒီနိုင်ငံထဲမှာရောက်နေသူတွေကို လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး
ဖော်ဖော်ရွေရွေ လက်ခံစကားပြောလေ့ရှိပါတယ်။ သူဟာ နာမည်ကျော်
သေနတ်ပစ်ချန်ပီယံတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လူမျိုးခြားတွေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဘာသာရေး သတင်းအချက်အလက်တွေကို
အချိန်မှာ မြန်မာလူမျိုးတွေ သီးသန့်စကားပြောခွင့်ရပါတယ်။ ကျွန်မတို့ အဖွဲထဲမှာ မြန်မာပြည်ဖွား
ဗုဒဘာသာ မူဆလင်နဲ့ ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်တွေ စုံစုံလင်လင်ပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိ နိုင်ငံတကာမှာ
နာမည်ဆိုးနဲ့ ကျော်ကြားနေတဲ့ သတင်းတွေနဲ့ ပက်သက်လို့ ကျွန်မတို့ကို လေသံလေးတောင် မဟခဲ့ပါဘူး။
ဆိုးသည်ကောင်းသည် ဝေဖန်ခြင်းမရှိသလို ဘာသာရေးနဲ့နွယ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေကို စိတ်ဝင်စားတဲ့
မြင်မြင်သမျှ လူမျိုးခြားတွေက ကျွန်မတို့ နိုင်ငံရဲ့ သတင်းဆိုးတွေကို စိတ်ဝင်တစား မေးမြန်းစပ်စုနေချိန်မှာ
နားလည်မှုရှိစွာနဲ့ နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့တဲ့ စော်ဘွားတစ်ယောက်ကို ပထမဆုံးအကြိမ် ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
ဆိုဖာပေါ်မှာ ထိုင်နေတဲ့ အချိန်မှာ သူက အာရပ်ဓလေ့အတိုင်း ကြမ်းပြင်မှာထိုင်ပြီး ညစာ
စားနေတာမြင်ရတော့ မြန်မာပီပီ စိတ်မသက်မသာ ခံစားရပါသေးတယ်။
ဓါတ်ပုံရိုက်ချိန်မှာလဲ အခြားလူမျိုးတွေ ထိုင်နေတဲ့ ဆိုဖာခုံရဲ့ အောက်မှာ သူကထိုင်ပြီး
ဂါရဝတရားကို ရှေ့တန်းတင်တဲ့ မြန်မာပီပီ မတ်တပ်ရပ်ပြီး
ဘာသာမရွေး သူ့ဆီကို အချိန်မရွေးလာတွေ့ဖို့နဲ့ သူ့ရဲ့ နန်းတော်ကို အမြဲတမ်း တံခါးဖွင့်ထားကြောင်းလဲ
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကျွန်မတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံက ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကို ပြန်မြင်ယောင်မိပါတယ်။
ထိုင်းဘုရင်ကို အခစားဝင်နေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဟာ ကြမ်းပြင်မှာ ဝပ်တွားပြီး
ခယနေတဲ့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံဟာ ကျွန်မတို့အာရှတိုက်သား သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်တွေနဲ့ ပြည်သူတွေကြားက
ဂါရဝ တရားကို ပြတဲ့ ပြယုဒ်တစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့်
အနောက်နိုင်ငံနဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာတော့ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ဝပ်တွားဂါရဝပြုတာထက် ရင်ထဲ
အသည်းထဲက နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်မြတ်နိုးခြင်းကို ပြကြတဲ့ ပြည်သူတွေကိုပဲ တွေ့ရပါတယ်။
အုပ်ချုပ်သူတွေကို ပြည်သူတွေက ဘာ့ကြောင့်ချစ်တာလဲ ဘယ်လို ချစ်တာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေ
အမြင်အရ အတွေ့အကြုံအရ ဒီနိုင်ငံမှာ အလုပ်လာလုပ်နေရတဲ့ ဧည့်သည်နိုင်ငံသူတစ်ယောက်ဆိုပေမယ့်
ဒေသခံ အမျိုးသမီးတွေနဲ့တန်းတူ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးရပါတယ်။
မီးရထားတွေ မော်တော်ကားတွေမှာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် သီးသန့်တွဲလေးတွေ သီးသန့်နေရာလေးတွေ
ရှိတဲ့အတွက် ခရီးသွားလာရာမှာ လုံခြုံမှုရှိပါတယ်။
အစိုးရရုံးလိုနေရာတွေမှာ တန်းစီစနစ်နဲ့ စောင့်နေရချိန်တွေမှာလဲ အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေနဲ့
မရောမနှောပဲ သီးသန့်တန်းစီပြီး အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြောဆိုခွင့်ရပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေအားလုံး ၂၄ နာရီကာလပတ်လုံး စိတ်လက်ချမ်းသာစွာ နေထိုင်သွားလာခွင့်ရှိပါတယ်။
တစ်ယောက်တည်း ဆိုပေမယ့် ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်နေရာမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် လုံခြုံမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့
အာမခံချက်မျိုးနဲ့ သတ္တိရှိရှိ ရပ်တည်နေထိုင်ခွင့်ရထားပါတယ်။
ဘဝလုံခြုံရေးအတွက် စိုးရိမ်စရာ ပူပန်ကြောင့်ကြစရာ မရှိပါဘူး။ အပူအပင်သောက ကင်းကင်းနဲ့
သတင်းစာတွေ မီဒီယာတွေမှာ ခိုးဆိုးလုယက်မှု လူသတ်မှု ဓါးပြမှု မုဒိန်းမှု တွေကို ကျွန်မတို့
မြန်မာပြည်က သတင်းစာတွေ မီဒီယာတွေမှာလို ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် မတွေ့ရတတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အရှိန်အဟုန်ကို ရပ်တန့်စေမယ့် အဟန့်အတားဖြစ်စေမယ့် အကျိုးမဲ့စေမယ့်
သတင်းတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ မီဒီယာတွေရဲ့ ပါးနပ်မှုနဲ့ ပရိုတိုကိုး
ကို အပြည့်အဝ တွေ့ရပြန်ပါတယ်။
ဒီနိုင်ငံဟာ အာရပ်နိုင်ငံ ဆိုပေမယ့် ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွေ ဟိန္ဒူဘုရား ရှိခိုးကျောင်းတွေဆောက်လုပ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ သင်္ကန်းဝတ် သီရိလင်္ကာဘုန်းကြီးတွေ လနဲ့ချီပြီး သီတင်းသုံးနေတာကို ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ မြန်မာတွေ ဦးဆောင်ပြီး စီစဉ်တဲ့ တရားပွဲတွေကို ခွင့်ပြုပေးပါတယ်။
ဧည့်သည် နိုင်ငံသားတွေတောင် ဘဝလုံခြုံရေးနဲ့ မနက်ဖြန်တိုင်းအတွက် အိပ်မက်တွေ မက်ခွင့်ရှိနေတဲ့
နိုင်ငံတစ်ခုမှာ ကာယကံရှင် နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ လိုအပ်တာထက်ပိုတဲ့ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေ
ပြည်သူတွေက အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားတွေကို ရင်ထဲက နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်မြတ်နိုးကြသလို လေးလေးစားစားနဲ့
ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးသော ဘုရင်နဲ့ နိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိဘုရင်တွေရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို နေရာတိုင်းမှာ
အမြတ်တနိုးနဲ့ ချိတ်ဆွဲထားတာ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတဲ့ အဖြေကို ကျွန်မ သိခွင့်ရလာပါတယ်။ လူနေအဆောက်အဦတွေမှာ
လမ်းတွေမှာ ရှော့ပင်းမောတွေမှာ တောင်တန်းတွေမှာ ကားတွေမှာ နိုင်ငံရဲ့ အလံကို မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့
ဘာ့ကြောင့်ချိတ်ဆွဲကြတယ် ရေးဆွဲထားကြတယ် ဆိုတာကိုလဲ ဘယ်သူ့ကိုမှ မေးစရာမလိုပဲ သဘောပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။­­­­
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားရဲ့ ပြည်သူတွေအပေါ်ထားရှိတဲ့
စေတနာ မေတ္တာ အပြန်အလှန်လေးစားမှု ဆိုတဲ့ ပေတံတစ်ချောင်းနဲ့ တိုင်းတာတတ်ဖို့ ကျွန်မ သင်ယူမိပါတယ်။
သစ်ပင် မြက်ပင်မြက်ပင်လေးတွေကိုတောင် ချစ်တတ်သူမို့ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ်
ကျွန်မချစ်တဲ့ နိုင်ငံကို အများတကာက လေးစားအားကျရတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလဲ ဖြစ်စေချင်မိပါတယ်။
သူတပါးတိုင်းပြည်မှာ ကျွန်မ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်စက်နေရချိန်တွေမှာ ကျွန်မတို့
နိုင်ငံက သန်း၆၀ ကျော် ပြည်သူတွေကိုလဲ သောကကင်းကင်းနဲ့ အိပ်စက်ခွင့်ရစေချင်မိပါတယ်။
အားသာချက်တွေကိုမြင်လေတိုင်း ကျွန်မချစ်တဲ့ နိုင်ငံကိုလဲ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးစေလိုတဲ့ဆန္ဒလဲ
အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားတွေကို ပြည်သူတွေကြားမှာ လက်ရည်တပြင်တည်း မြင်ယောင်ကြည့်ရင်း....
"April Fool’s Day"
ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ April Fool’s Day ကတော့ ဟောလိုး ဝင်းဒေးလို၊ ဗယ်လင်တိုင်းဒေးလို
မြန်မာတွေ နဲ့ ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင် နေ ပြီ ဖြစ်တဲ့ ပြက္ခဒိန် ထဲ က နေ့လေး တစ်နေ့ပါပဲ။ နိုင်ငံတကာ မှာတော့ ချစ်သူများနေ့မှာ ချစ်သူခင်သူတွေ
အတွက် အမှတ် တရ လက်ဆောင် ဝယ်ပေးတဲ့ ဓလေ့တွေ ဟောလိုးဝင်းဒေးမှာ မျက်နှာဖုံး
ကာဗာတွေတပ် ထူးခြား ဆန်းပြားတဲ့ အဝတ်အစားမျိုးစုံ ဝတ်ပြီး သကြား လုံး ဝေကြတဲ့ ဓလေ့လေးတွေ ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ April Fool’s Day နေ့မှာတော့ ထူးထူးခြားခြား လက်ဆောင် ပေးစရာ ဆန်းဆန်းပြားပြား ဝတ်စားဆင်ယင်စရာ မရှိပါဘူး။ ကမ္ဘာ တစ်ဝန်းလုံး မှာ April Fool နေ့ကို ကျင်းပလေ့ ရှိကြပေမယ့် တရား ဝင် ရုံးပိတ်ရက် ရယ်လို့ တသီးတခြား သတ်မှတ် ထားတာမျိုး မရှိပါဘူး။ ဧပြီလ ၁ ရက် နေ့မှာ တစ်နေ့ လုံး လိုလို ပျော်စရာ ရွှင်စရာ ရယ်မော
စရာတွေ ကောလာဟလ နောက်ပြောင် ပြက်လုံးတွေ နဲ့ April Fool နေ့လေး ကို ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲ ကြ တဲ့ ထုံးစံလေးပဲ ရှိပါ တယ်။ April Fool နေ့လေး ဖြစ်လာရခြင်း ရဲ့ နောက်ခံ သမိုင်းကြောင်းတွေ ကတော့ တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ မတူကြပါဘူး။ အများအားဖြင့်တော့ ပါးစပ် ရာဇဝင်တွေ သာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုလို့ရပါ တယ်။ ဘော်စတွန် တက္ကသိုလ်က သမိုင်းပါမောက္ခ ဂျိုးဇက်ဘော်စကင် ကတော့ ပထမရောမ အင်ပါယာကို စတင်တည်ထောင်တဲ့ အချိန်ကတည်းက April Fool လုပ်တဲ့ ဓလေ့ ရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်တုန်းက ပညာရှိ
သုခမိန်တွေ နဲ့ ဘုရင့် ပျော်တော်ဆက် တွေက ရောမ ပြည့်ရှင် ကို သူတို့ ကသာ တိုင်းပြည် ကို ပိုမို တိုး တက် ကောင်းမွန်အောင် အုပ်ချုပ်နိုင် ပါတယ် လို့
လျှောက်တင် ပြောဆိုကြ တာကြောင့် ရောမပြည့်ရှင်က ကူဂယ်လ်လို့ အမည် ရတဲ့ ပညာရှိ အမတ်ကို တိုင်းပြည်ကို တစ်ရက် တိတိ အုပ်ချုပ်စေ ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကူဂယ်လ်ဟာ သူ အုပ်ချုပ်ခွင့် ရတဲ့တစ်ရက်မှာ ရယ်စရာကောင်း တဲ့ အမိန့်တွေ ထုတ်ပြန်ခဲ့တာမို့ အဲဒီဓလေ့ဟာ ပထမရောမ အင်ပါယာမှာ ထုံးစံတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှုအရ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ဟာ ရှေးခေတ် ရောမတွေနဲ့ ဟိန္ဒူတွေ နှစ်သစ်ကူးပွဲ ကျင်းပတဲ့ နေ့တစ်နေ့လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အလယ်ခေတ် အေဒီ (၁၁ဝဝ-၁၄ဝဝ) မှာတော့ ဥရောပတိုက်မှာ နွေဦးကို ကြိုတဲ့နှစ်သစ်ကူးပွဲကို မတ်လ၂၅ ရက်နေ့မှာ ပြောင်းလဲ ကျင်းပခဲ့ပြန် ပါတယ်။ ၁၅၈၂ မှာတော့ အဋ္ဌမမြောက် ပုပ်ရဟန်း မင်းကြီး ဂရီဂိုရီ ဟာ ရှေးဟောင်း ဂျူလီယန် ပြက္ခဒိန် ကို ပြက္ခဒိန် အသစ်နဲ့ အစားထိုး လိုက်ပြီး နှစ်သစ်ကူးတဲ့ နေ့ကို ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပ ဖို့ ပြောင်း လဲ သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဋ္ဌမမြောက် ပုပ် ရဟန်းမင်းကြီး ဂရီဂိုရီ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ ပြက္ခဒိန် သစ်ကိုတော့ ဂရီဂိုရီယန် ပြက္ခဒိန်လို့ သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဥရောပ တစ်ခွင်မှာ အသစ်ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ ပြက္ခဒိန်ကို လက်ခံသူတွေ ရှိကြသလို လက်မခံသူတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြက္ခဒိန် အသစ် ပြောင်းလဲ ခဲ့ပေ မယ့် တချို့ ကတော့ ဧပြီလ ၁ ရက် နေ့ကို နှစ်သစ် ကူးနေ့ အဖြစ် ဆက်လက် ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ ယုံတမ်း စကားတွေ အရတော့ ပြက္ခဒိန် ပြောင်းလိုက်တာကို မသိ လိုက်ကြတဲ့ ကျေးလက် က လူတွေက နှစ်သစ်ကူးပွဲကို ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှာပဲ အစဉ်အလာ
မပျက် ဆက်လက်ပြီး ကျင်းပခဲ့ကြ တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်း မှာတော့ ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ ရောက် တိုင်း ပျော်စရာရွှင် စရာ နောက်ပြောင် ကျီစယ်တဲ့ ဓလေ့ဟာ ဥရောပ တိုက်မှာ စပြီးထွန်းကားခဲ့ပါ တယ်။ ကိုရီးယားနိုင်ငံ မှာတော့ ဂျိုဆွန်ရာစုနှစ် (၁၃၉၂-၁၈၉၇) တုန်းက နှစ် တစ်နှစ်ရဲ့ ပထမဆုံး နှင်း ကျတဲ့နေ့မှာ ရာထူးကြီးငယ် မရွေး တော်ဝင် မိသားစု ဝင်တွေနဲ့ တိုင်းသူ ပြည်သားတွေကို လိမ်ညာ ပြောဆို ခွင့် နောက်ပြောင် ကျီစယ်ခွင့် ပြုထားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနေ့မှာ ပန်းကန် လုံးလေးထဲ နှင်းခဲတွေ ထည့်ပြီး မိမိ နောက်ပြောင် ကျီစယ် လို သူကို ဆင်ခြေ အမျိုးမျိုးနဲ့ လှည့်ဖျားပြီး ပေးပို့လေ့ ရှိပါတယ်။ နှင်းခဲ ပန်းကန်ကို လက်ခံ ရရှိသူက ကစား
ပွဲမှာ ရှုံးနိမ့်သူ ဖြစ်ပြီး ပေးပို့လာ သူရဲ့ဆန္ဒကို ဖြည့် ဆည်းပေး ရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တမင်သက်သက် ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိ စီစဉ်ထားတာမျိုး မဟုတ်တဲ့ အတွက် အန္တရာယ် ကင်းတဲ့ ကျီစယ် မှု နောက် ပြောင်မှုတွေ အဖြစ်သာ သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပြင်သစ်နိုင်ငံ မှာတော့ မိမိ စနောက်လိုသူ ရဲ့ နောက်ကျောဘက်မှာ ငါးရုပ် ကလေးကို တိတ်တဆိတ် ကပ်ထားပြီး ကျီစယ်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ ကာယကံရှင် သိသွားတဲ့ အချိန်မှာတော့ April Fish ဒါမှမဟုတ် April Fool လို့အော်ပြီး ထွက်ပြေးကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ ကို ဧပြီ ငါးနေ့ လို့လည်း ခေါ် ကြ ပါသေးတယ်။ ပြင်သစ် နိုင်ငံရဲ့ ဧပြီဖူးနေ့ မှာ ငါးရုပ်ကလေး တွေနဲ့ ကျီစယ်ခြင်းဟာ မရိုးတဲ့ ထုံးစံတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဧပြီငါး ဆိုတာကတော့ အလွယ်တကူ ဖမ်းလို့ ရနိုင် တဲ့ ငါးအသေး စားလေးတွေ ကို ခေါ် ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ မှာတော့ April Fool နေ့ နောက်ပြောင် ကျီစယ်ခြင်းကို ဧပြီလ ၁
ရက်နေ့ မနက်စောစောပိုင်း အချိန်တွေမှာသာ ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ အဲဒီနေ့ မှာ နောက်ပြောင်ခြင်း ခံရသူကို တော့ ခေါက်ဆွဲ အဖြစ် တင်စားခေါ်ဆိုကြပါ တယ်။ စကော့တလန် နိုင်ငံမှာတော့ ဧပြီဖူးဒေးကို နှစ်ရက် ကျင်းပလေ့ရှိပြီး ဧပြီလ ၂
ရက်နေ့ ဒုတိယနေ့ မှာတော့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေ ကြား၊ မိသားစု ဝင်တွေ ကြားမှာ နောက်ပြောင် ကျီစယ်ခြင်း ကို တစ်နေ့လုံး လိုလို ဆင်နွှဲလေ့ ရှိပါတယ်။ နောက်ကျောမှာ စာပြောင်တွေ ပုံတွေကပ်ပြီး အချင်း ချင်း ကျီစယ်လေ့ရှိကြတဲ့ ဒုတိယနေ့ ကို တော့ Taily Day လို့ သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ကြပါ တယ်။ ပေါ်တူဂီ နိုင်ငံမှာတော့ အီစတာဥပုသ်လ မရောက်ခင် စနေနဲ့ တနင်္ဂနွေ နေ့တွေ ကို April Fool နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ဆင်နွှဲလေ့ ရှိကြ ပါတယ်။ ထုံးတမ်း အစဉ် အလာ အရ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဂျုံမှုန့်နဲ့ ဖျန်းပက် ကျီစယ်တဲ့ဓလေ့ဟာ ပေါ်တူဂီ နိုင်ငံရဲ့ ဧပြီဖူး ဓလေ့လေးပါပဲ။ သူငယ်ချင်းတွေ ကြားမှာ နောက်ပြောင် ကျီစယ်မှုတွေ ကတော့ ရင်းနှီးမှု အဆင့်ကိုလိုက်ပြီး အမျိုးမျိုး ရှိကြပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ခေတ်တွေ မှာတော့
ဧပြီဖူးနေ့ကို မီဒီယာတွေ ကပါ ကျယ် ကျယ်ပြန့်ပြန့် တင်ဆက် လာကြတာကို တွေ့ရပါ တယ်။ တစ်ခါတုန်း ကတော့ ဧပြီဖူးနေ့မှာ ”spaghetti farmers”
ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ် ရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်းတိုလေး တစ်ခုကို ထုတ်လွှင့် ပြသခဲ့ပါ တယ်။
ဇာတ်လမ်းလေး ကတော့ အီတလီ ခေါက်ဆွဲ လို့ခေါ်တဲ့ (Spaghetti) အပင်ကနေ ရာသီပေါ်
သီးနှံတွေကို ရိတ်သိမ်းကြတဲ့ အကြောင်းလေးကို ရိုက်ပြထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ အဲဒီနေ့မှာတော့ သူငယ်ချင်း အလုပ် သွားခါနီး ကားသော့ ဖွက်ထားတာမျိုး ဖိနပ်တစ်ဖက် ဖွက်ထားတာမျိုး ခြေအိတ်တွေ၊ လည်စီးနက်ခ် တိုင်တွေ ဖွက်ထားတာမျိုး မနက် အိပ်ရာထဖို့ပေး ထားတဲ့နှိုးစက်ကို နာရီ ဝက်လောက် နောက်ကျ အောင်လုပ်တာမျိုး အမျိုးမျိုး ကျီစယ်ကြပါတယ်။ ဒါမှ မဟုတ်ရင်လည်း ဖုန်းဆက်ပြီး နောက်ပြောင်တာ စာပို့ပြီး ကျီစယ် တာ ကောလာဟလ ယုံတမ်း စကားတွေ အခြေအမြစ် မရှိတဲ့ သတင်း တွေ ဖြန့်ဝေတာ မျိုးတွေ လည်း လုပ်လေ့ ရှိကြပါ တယ်။ ”မင်းအိမ်က ပါဆယ် ရောက်နေတယ်လို့ စာတိုက်က ဖုန်းဆက်လာတယ် စာတိုက်မှာ သွား ထုတ်လိုက်ပါဦး” ”ငါမတော်တဆ မင်းရဲ့မျက်မှန်ကို တက်နင်း မိတယ်ကွာ” ”ညနေကျရင် မန်နေဂျာက ငါတို့ အားလုံး ကို ညစာစားပွဲ ဖိတ်ထားတယ် ဟိုတယ်ကို ၇ နာရီ အရောက်လာခဲ့နော်” ”မင်းရဲ့ ကောင်မလေး အခုပဲ ဆေးရုံတင်လိုက် ရတယ် ဆေးရုံကို လိုက်သွား လိုက်ပါဦးကွာ” ”ညီလေးရေ ဒီနေ့ကျူရှင် မရှိဘူးတဲ့ မင်းဆရာမ အခုပဲ ဖုန်းဆက်တယ်” အချင်းချင်း ပျော်စေပြက်စေ နောက်ပြောင် ကျီစယ်ခြင်း ဖြစ်တဲ့အတွက် သူတစ်ပါး
ထိခိုက် နာကျင်စေ လောက်အောင်တော့ စနောက်လေ့ မရှိကြ ပါဘူး။ တစ်စုံ တစ်ယောက်
ကို အလွန်အမင်း ကျီစယ်မိတယ် ဆိုရင်လည်း သူငယ်ချင်း ဒုက္ခ မရောက်ခင်မှာ ဧပြီဖူးလို့ အချိန်မီ ပြောလေ့ရှိကြ ပါတယ်။ ရတီ စာဖတ် ပရိသတ်တွေရော
ဒီနှစ် ဧပြီဖူးနေ့ မှာ ဘယ်လို နောက်ပြောင် ကျီစယ်ဖို့ စိတ်ကူး ရှိကြပါသလဲ။
စာဖတ်သူတွေ အားလုံး ရယ်မော ပျော် ရွှင်ဖွယ် ဧပြီဖူးနေ့လေး ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင် ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်ရှင်.... Saturday, April 06, 2013
“လောကမှာ ပညာတတ်တဲ့ မိန်းကလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပညာ မတတ်တဲ့ မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြူတဲ့ မိန်းကလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ညိုတဲ့ မိန်းကလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် မည်းတဲ့ မိန်းကလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ယောကျာ်းတွေ မျက်စိထဲမှာ သာမာန် မိန်းမတစ်ယောက် ဖြစ်နေမယ်…အကြမ်းဖက်သမားတွေ အမြင်မှာတော့ သာမာန် သားကောင် တစ်ကောင် ဖြစ်နေလိမ့်မယ်… “ (၁)
တယ်လီဖုန်းမြည်သံအတူ တာဝန်ကျ မန်နေဂျာရဲ့
အသံကို စကားပြောစက်ပေါ်မှာ စူးစူးဝါးဝါး ကြားလိုက်ရသည်။
မန်နေဂျာရုံးခန်းက နံပါတ် စကားပြောစက်ကလဲ မန်နေဂျာရဲ့ စကားပြောစက်ဖြစ်နေတာမို့
“ဆေးအဖွဲ့ကို ဖုန်းခေါ်ပါ…. ဆေးအဖွဲ့ကို အခုချက်ချင်းဖုန်းခေါ်ပါ”
“မင်းရဲ့ ရုံးခန်းရှေ့က အများသုံး သန့်စင်ခန်း”
လေသံကို နားထောင်ကြည့်ရုံနဲ့ အရေးပေါ် ကိစ္စတစုံတရာ ရှိနေပြီဆိုတာ ခန့်မှန်းမိလိုက်ပါသည်။
လာရမယ့်နေရာကို သတင်းပို့ပြီးတာနဲ့ ထိုင်နေရာကထပြီး ရုံးခန်းရှေ့တည့်တည့်မှာ မြင်နေရတဲ့
အများသုံး သန့်စင်ခန်းကိုလှမ်းကြည့် လိုက်မိပါသည်။
ယူနီဖောင်းဝတ် ရဲတွေ ရဲမေတွေ လုံခြုံရေးတွေနဲ့ တာဝန်ကျ
ကြီးကြပ်ရေးမှူးတွေ မန်နေဂျာတွေ သန့်စင်ခန်းရှေ့မှာ စုရုံးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါသည်။
သန့်စင်ခန်းကိုတော့ အတားအဆီးတွေနဲ့ ယာယီပိတ်ထားပြီး သက်ဆိုင်ရာ ရဲတွေ ရဲမေတွေကတော့
သန့်စင်ခန်းထဲ ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ အလုပ်များနေကြပါသည်။
လက်မှာ ပတ်ထားတဲ့ နာရီကို ကြည့်လိုက်တော့
နေ့လည် နှစ်နာရီခွဲ။ အတွေ့အကြုံအရ ဒီလိုရေးအပေါ် အခြေအနေမျိုးဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အာဖရိက
ခရီးစဉ်တစ်ခုကလဲ ညနေလေးနာရီမှာ ရှိနေတာမို့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့အတူ တိုးတိုးလေးဆုတောင်းလိုက်မိပါသည်။
“သနားစရာ ကလေးမလေးတွေထဲက မဖြစ်ပါစေနဲ့……”
ကျွန်မ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ဆုတောင်းမိစဉ်မှာပဲ
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အရာရှိတစ်ယောက် ရုံးခန်းထဲကို ဝင်လာပြီး နိုင်ငံကူးလက်မှတ် တစ်ခုနဲ့အတူ
လေယာဉ်ပေါ် တက်ရောက်ခွင့် လက်မှတ်လေးကို မိတ္တူ ၅ စုံကူးပေးဖို့ ပြောလာပါသည်။ ကျွန်မ လက်ထဲကို ကမ်းပေးလာတဲ့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လေးရဲ့
အရောင်ကို မဝံ့မရဲ ကြည့်လိုက်မိပါသည်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အရောင်လေးက ကျွန်မနဲ့
အင်မတန်ရင်းရင်းနှီးနှီး ရှိလှတဲ့ အရောင်လေး စာအုပ်လေးထဲမှာ ညှပ်ထားတဲ့ လေယာဉ်ပေါ်တက်ခွင့်
လက်မှတ်လေးမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ခရီးစဉ်ကလဲ ကျွန်မ စိုးထိတ်မိတဲ့ အာဖရိက ခရီးစဉ်လေး။
မြင်နေရတဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေကို မသိမသာ ကြည့်မိပြန်တော့ ရင်ထဲမှာ ဆို့သွားရပြန်ပါသည်။
စာအုပ်လေးထဲက ပါတ်စ်ပို့ ဓါတ်ပုံက သေးသေးလေးဆိုပေမယ့်
မျက်လုံးမွဲမွဲ ဆံစကျဲကျဲ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ အသက် ၂၂ နှစ်သာရှိသေးတဲ့ ကလေးမလေးကို သနားစဖွယ်တွေ့လိုက်ရပါသည်။ “သူ့အခြေအနေ ဘယ်လိုရှိလဲ … ဘာဖြစ်တာလဲဟင်…”
ဒီလိုကိစ္စတွေကို ကျွန်မတို့ ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့
စပ်စုဖို့ မသင့်ပေမယ့် မနေနိုင်လွန်းစွာ မရဲတရဲလေး မေးကြည့်တော့ သဘောကောင်းပုံရတဲ့
အရာရှိက သူသိသလောက် ဖြေပေးပါသည်။
“အခြေအနေက ၅၀-၅၀ ပဲ.. အခု ဆေးရုံပို့တော့မယ်…. သန့်စင်ခန်းထဲမှာ ကြိုးဆွဲချပြီး သေကြောင်းကြံစည်မှုလေ… သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းက အချိန်မီတွေ့လို့သာပေါ့..”
တကယ်ဆို ဒီအချိန်ဟာ ကလေးမလေး အစွမ်းကုန်
ပျော်ရွှင်နေရမယ့်အချိန်။ မိသားစုတွေ စောင့်မျှော်နေတဲ့ အိမ်ကို ပြန်ဖို့ လမ်းခုလတ်မှာ
ဒီလို မဖြစ်သင့်ဘူးလေ… သူ့သူငယ်ချင်းလေးတွေက ဘာလို့များ မတားမြစ်ကြပါလိမ့်….
အကောင်အထည်ဖော်နေကြတဲ့ ဒီအီသီယိုးပီးယား နိုင်ငံသူလေးတွေကို ကျွန်မ သနားစိတ်ပိုမိတာ
သူတို့ရဲ့ မတော်တဆမှုများစွာနဲ့ အရှက်တကွဲ
အကျိုးနည်း ဖြစ်ရပ်ပေါင်းများစွာကို မကြာခဏဆိုသလို မြင်တွေ့နေရသူမို့ ဂရုဏာ သက်မိသလို
သူတို့ကိုယ်စား ထိခိုက်ကြေကွဲနာကျင်မိတဲ့ အကြိမ်တွေလဲ မနည်းလှ…
ကျွန်မရဲ့ ရုံးခန်းလေးက အများသုံး အမျိုးသမီး
သန့်စင်ခန်းတွေရဲ့ ရှေ့တည့်တည့်မှာ ရှိနေသလို ကျွန်မရဲ့ အလုပ်ချိန်တွေကလဲ သူတို့ခရီးစဉ်တွေရှိတတ်တဲ့
အချိန်တွေ ဖြစ်နေတာက သူတို့လေးတွေရဲ့ ဘဝတွေကို သိမြင်စာနာဖို့ ဖြစ်လာခဲ့လေသလားမသိ။
နိုင်ငံတကာ လေဆိပ်တွေမှာ အမျိုးသမီးအများစု
ပြဿနာ အများဆုံးဖြစ်တတ်တဲ့ နေရာတွေဟာ အများသုံးသန့်စင်ခန်းတွေပဲ ဖြစ်ပါသည်။ အခြားလေဆိပ်တွေကို
သတိမထားမိပေမယ့် ကျွန်မတို့ လေဆိပ်မှာ မတော်မဆမှုတွေ ပေါင်းစုံတဲ့နေရာဟာ ကျွန်မရုံးခန်းရှေ့တည့်တည့်က
အမျိုးသမီးသန့်စင်ခန်းတွေဆိုတာကိုတော့ လက်မခံချင်လဲ လက်ခံနေရပါသည်။
မကြာခဏဆိုသလို သန့်စင်ခန်း ယာယီပိတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့
အဖြစ်တွေကို ကြုံတွေ့ရတတ်သလို သန့်စင်ခန်းပိတ်ရခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ သင်ယူမှတ်သားလို့
မကုန်နိုင်သော သင်ခန်းစာတွေ ကျန်ရစ်ခဲ့စမြဲ။
အတွေးစတွေနဲ့ ငြိမ်သက်နေဆဲမှာပဲ လူနာတင် တွန်းလှည်းပေါ်မှာ အောက်ဆီဂျင်ပိုက်တန်းလန်း အရေးပေါ်ဆေးပုလင်းတန်းလန်းနဲ့
ပါသွားတဲ့ ကလေးမလေးကို ဖြတ်ကနဲတွေ့လိုက်ရပါသည်။
စုစုရုံးရုံးရှိနေခဲ့တဲ့ လူအုပ်ကြီးရှင်းသွားပေမယ့် အများသုံးသန့်စင်ခန်းကတော့ ပိတ်ထားဆဲ။
တာဝန်ကျ ရဲတွေ ရဲမေတွေရဲ့ စစ်ဆေးရေး မပြီးမချင်း ပိတ်ထားတတ်တာကလဲ ထုံးစံလိုဖြစ်နေပါသည်။
အမည်ဖော်ပြလို့မရတဲ့ စိုးရိမ်သောကနဲ့ တွေဝေနေမိတဲ့ အချိန်မှာကျွန်မရုံးခန်းရဲ့ ဘေးကပ်ရက်က
ရုံးခန်းမှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ သူငယ်ချင်းမလေးနှစ်ယောက် ကော်ဖီခွက် ကိုယ်စီနဲ့ ကျွန်မရုံးခန်းထဲကို
ရောက်လာခဲ့ပါသည်။ သူတို့နှစ်ယောက် ကျွန်မကို နှုတ်ဆက်နေစဉ်မှာပဲ သန့်ရှင်းရေးတာဝန်ကျ
အမျိုးသမီးလေးလဲ သောက်ရေဗူးလေးကိုင်ပြီး ရေဖြည့်ဖို့ ရောက်လာခဲ့ပါသည်။ သန့်ရှင်းရေး အမျိုးသမီးလေးအနောက်မှာ
အခြားဌာနက ချာတိတ်မလေးနှစ်ယောက် ကပ်လျက်ပါလာတာမို့ မစပ်စုလေးတွေ စပ်စုဖို့ လာကြပြီဆိုတာ
အမျိုးသမီး သဘာဝ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး မေးခွန်းပေါင်းစုံ
ထွက်လာတော့မယ်ဆိုတာ သိနေပေမယ့် ကျွန်မကစပြီး မမေးမိအောင် နှုတ်ဆိတ်နေလိုက်ပါသည်။
“သူက ဘာဖြစ်လို့ ကြိုးဆွဲချ သေကြောင်းကြံတာလဲ”
“လေဆိပ်ထဲမှာ ကြိုးက ဘယ်ကရတာလဲ”
“ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး သန့်ရှင်းရေးသမားက မိသွားတာလဲ”
“လမ်းခုလတ်ကြီးမှာ ဘာလို့ အဲလိုလုပ်ရတာလဲ…..အိမ်ပြန်ရောက်မှ လုပ်တာမဟုတ်ဘူး “
ကျွန်မ အပါအဝင် မိန်းမသား ခြောက်ယောက်ရှိတဲ့
အခန်းလေးမှာ မေးခွန်းပေါင်းစုံ ထင်မြင်ချက်ပေါင်းစုံ သုံးသပ်ချက်ပေါင်းစုံ ပေါ်ထွက်လာပါသည်။
“သူခြုံလာတဲ့ ရှောစောင်လေးနဲ့ ကြိုးကွင်းလုပ်လိုက်တာလေ
မသန်မစွမ်းတွေ သုံးတဲ့ အခန်းကျယ်ကြီးထဲ မှာဖြစ်တာလို့ပြောတာပဲ “
“သန့်စင်ခန်းထဲမှာ ကြိုးဆွဲချပြီး သေကြောင်းမကြံခင် အဆိပ်တွေလဲ
“အဲဒီ အဆိပ်က ဘယ်ကရတာလဲ သူယူလာတာလား”
“ထုံးစံအတိုင်း သူ့ အိမ်ရှင်က အနိုင်ကျင့် စော်ကားလိုက်တာ ဖြစ်မှာပေါ့”
“သူ ဟိုကနေ ကိုယ်ဝန်ပါလာလို့လားမသိဘူးနော်”
“ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကပဲ အီသီယိုးပီးယားမလေးတစ်ယောက် အဲလိုဖြစ်ပြီး
ဘာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ခဲ့ ဖြစ်ခဲ့ ဘယ်လိုပဲ
ဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ နောက်ကွယ်က ကဲ့ရဲ့ ပြစ်တင်စကားတွေ တီးတိုး ဝေဖန်သံတွေက သနားစရာ မျက်နှာမွဲ
ချာတိတ်မလေးရဲ့ ကံကြမ္မာတွေကို ပြောင်းလဲစေနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါ….
သူတို့ပြောနေကြသလိုပဲ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်ရက်လောက်က
အလားတူ ပြဿနာတစ်ခု ကျွန်မရဲ့ မျက်စိရှေ့မှာ ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါသည်။
သူမအလုပ်လုပ်မယ့် အရှေ့အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို အသွား လမ်းခုလတ်မှာ အရေးပေါ်
အလုပ်လုပ်ဖို့ အသွား တထောက်နားတဲ့ လေဆိပ်
သန့်စင်ခန်းထဲမှာ သွေးသံရဲရဲနဲ့ ဒုက္ခများနေခဲ့တာမို့ နီးစပ်ရာ အမျိုးသမီးတွေက ရဲတွေ
လုံခြုံရေးတွေကို အကူအညီတောင်းလာခဲ့ပါသည်။ ဆေးအဖွဲ့က အရေးပေါ်ကုသမှုပေးပြီး ဆေးရုံပို့ပေးခဲ့တဲ့
အဖြစ်က သိပ်မကြာသေးပါ။ တချို့ကလဲ သူတို့ဆန္ဒမပါပဲ ရလာတဲ့ ကိုယ်ဝန်တွေကို
အမိမြေမရောက်ခင် လမ်းခုလတ်မှာ အလွယ်တကူ ရှင်းလင်းချင်ပုံရပါသည်။ တချို့ကလဲ မိခင်နိုင်ငံက
ပါလာတဲ့ ကိုယ်ဝန်တွေကို အလုပ်လုပ်တဲ နိုင်ငံအထိ မသယ်ချင်တဲ့အတွက် လမ်းခုလတ်မှာ ရှင်းကြလင်းကြသည်။
ဗဟုသုတနည်းသူလေးတွေ ဖြစ်တာမို့ လေဆိပ်တစ်ခုရဲ့ လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှု သဘောသဘာဝကို နားမလည်ကြရှာ။
လမ်းခုလတ် တထောက်နားရာ နိုင်ငံဆိုပေမယ့် ဥပဒေတင်းကျပ်တဲ့ နိုင်ငံရယ်လို့ မသိကြရှာ။
အများသုံးသန့်စင်ခန်းတစ်ခုဟာ သူတို့ရဲ့ အရှက်တွေ အသက်တွေအတွက် ထွက်ပေါက်တစ်ခုလို့ ရိုးရှင်းစွာပဲ
ဆင်းရဲတွင်းက ရုန်းထွက်ဖို့အတွက် ပညာမဲ့
မျက်နှာမွဲ အီသီယိုးပီးယားသူလေးတွေ နိုင်ငံရပ်ခြားကို အလုပ်သွားလုပ်ရတာ သူတို့အတွက်
သဘာဝ သူတို့ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ ဘဝတွေက အီသီယိုးပီးယားသူလေးတွေကို ပုပုညှက်ညှက်
သေးသေးကွေးကွေးလေးတွေ ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။ အရွယ်ရောက်ပင်ရောက်သော်ငြား ကိုယ်ခန္ဓာ ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှ၊ိ
အသားအရေ စိုပြည်ခြင်း အလျင်းမရှိ၊ အချို့ အချို့သော အာဖရိကသူ ပျိုဖြူလေးတွေအတွက် ရာဘာ
ဖိနပ်ဖြူဖြူလေးတွေ ဝတ်ဆင်ခွင့်ရခြင်းကပဲ မဟာဆုလာဘ် တစ်ပါးလေလား ရာဘာခြေညှပ်ဖိနပ် ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေးတွေနဲ့
နေမထိ ထိုင်မသာ ဖြစ်နေတဲ့ ဟန်လေးတွေက သူတို့ မျက်နှာတွေပေါ်မှာ အထင်းသား။
သူတို့ရဲ့ ငယ်ရွယ်နုပျိုမှုတွေနဲ့ ရင်းနှီးပြီး အလုပ်အကျွေးပြုကြသူတွေ ကံကောင်းစေချင်ပါသည်။
ဒါပေမယ့် သူတို့အားလုံးရဲ့ ကိုးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်က
ကျွန်မတို့ ဆုတောင်းကြသလို ကံမကောင်းနိုင်ကြ။
သူတပါးတိုင်းပြည်မှာ တနေ့ကို ၁၈ နာရီက
နာရီ ၂၀ နီးပါး အိမ်အလုပ်တွေ မနားတမ်းလုပ်ရမည်။ အစားအသောက်ကို မဝရေစာ အသက်ရှင် အလုပ်လုပ်နိုင်ရုံသာ
စားခွင့်ရမည်။အခန့်မသင့်ရင် အိမ်ရှင် အမျိုးကောင်းသားတွေရဲ့ သားကောင်လဲ ဖြစ်နိုင်သည်လေ။
ကံအဆိုးဆုံး မိန်းကလေးတွေကတော့ ဖခင်မည်သူမည်ဝါ
ဖော်ထုတ်ခွင့်မရပဲ မွေးကင်းစ နီတာရဲ ရင်သွေးလေးတွေ ပိုက်ပြီး အမိမြေကို ပြန်ကြရမည်။ ကံမဆိုးတဆိုးလို့ ဆိုနိုင်သူ ချာတိတ်မလေးတစ်ယောက်ကတော့
အိမ်အပြန်ခရီးမှာ သွက်သွက်ခါအောင် ရူးသွပ်သွားခဲ့တာမို့ ခရီးစဉ်ကို ဖျက်သိမ်းပြီး ဆေးရုံကိုပို့ခဲ့ရဘူးပါသည်။
အိမ်ဖော်လုပ်ကြသူတွေထဲမှာ အင်ဒိုနီးရှားသူ သီရိလင်္ကာသူ ဖိလစ်ပိုင်သူ
အိမ်ရှင်တွေရဲ့ ကိုယ်ထိလက်ရောက် နှိပ်စက်မှုကြောင့် ဒုက္ခတဘဝနဲ့ အိမ်ပြန်သွားတာကို
သီရိလင်္ကာသူ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အမိမြေကို ပြန်ရောက်ပြီးမှ သံရုံးကနေတဆင့်
သူမအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ အိမ်ရှင်ကို တရားစွဲခဲ့တဲ့ သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို
ရိုက်ကူးထားခဲ့တဲ့ဓါတ်မှန်တွေအရ သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အိမ်ရှင်တွေ
ရိုက်သွင်းထားခဲ့တဲ့ သံချောင်းပေါင်းများစွာကိုတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ သူမရဲ့
ပြောဆိုချက်အရ အိမ်ရှင်က စိတ်ဆိုးတဲ့ အခါတိုင်း သံချောင်းတွေကို မီးကင်ပြီး သူမရဲ့
ခန္ဓာကိုယ် အနှံ့အပြားမှာ ရိုက်သွင်းခဲ့ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါသည်။
လေးလသားအရွယ် ကလေးငယ်လေး မတော်မဆ သေဆုံးသွားမှုနဲ့ သုံးနှစ်ကျော်ထောင်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရပြီး
နောက်ဆုံးမှာတော့ တရားရုံးက သူမကို သေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။
ကုသိုလ်ကံ အကျိုးပေးနုံချာလို့ ကျောမွဲ
ဖြစ်ရတဲ့ ဘဝတွေမှာ ထပ်ဆင့် ထုထောင်းလာတဲ့ လောကဓံက ခပ်ကြမ်းကြမ်း ခပ်ရမ်းရမ်း။
ဒုက္ခတောမှာ အမောကြီးမောပြီး အစုန်အဆန်
မျောနေသူတွေကို မတွေ့ချင်လို့လဲ မျက်နှာမလွှဲနိုင်ခဲ့ပါ။
ကျွန်မရဲ့ ရုံးခန်းလေးထဲမှာ သတင်းတွေ မှတ်ချက်တွေ ထင်မြင်ချက်တွေ ဟိုတစသည်တစ ပျံ့ကျဲနေခဲ့ပါသည်။
များမြောင်လွန်းလှတဲ့ ရုံးခန်းလေးကို နှုတ်ဆက်ရင်း အကြိမ်ကြိမ် တောင်းခဲ့ဘူးတဲ့ ဆုတစ်ခုကို
“အတိတ်ဘဝက ဝဋ်ကြွှေးတွေရှိရင် ကျေပါစေ ညီမလေးတို့ရေ…”
ညနေက အလုပ်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်တွေ
ပြန်မြင်ယောင်ပြီး အိပ်မရနိုင်တာမို့ အိပ်ယာထဲမှာပဲ အမေရိကန် စာရေးဆရာမ တစ်ယောက်ရဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို အမြည်းသဘောနဲ့ တပိုင်းတစ ဖတ်ကြည့်မိပါသည်။
စာရေးသူရဲ့ စာအုပ်မိတ်ဆက်နဲ့ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကို ဖတ်ပြီး ဝတ္ထုကို အစ အလယ် အဆုံး နည်းနည်းချင်းစီ မြည်းစမ်းရင်း စာဖတ်ခြင်းကို အစပျိုးရပါသည်။ မြန်မာဝတ္ထုမဟုတ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုတွေ ဖတ်တိုင်း တစ်အုပ်လုံးကို အစအဆုံး မဖတ်ခင် စာအုပ်ကို အဆင်ပြေတဲ့ နေရာကနေလျှောက်ဖတ်ပြီး ဇာတ်လမ်းကို မြည်းစမ်းကြည့်တတ်တာ ကျွန်မရဲ့ အကျင့်ပဲ ဖြစ်ပါသည်။
စာအုပ်လေးရဲ့ အရှေ့ပိုင်း ဇာတ်လမ်းအစလေးနားမှာ ရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရတဲ့ စကားပြောတစ်ခုက ကျွန်မကို အကြီးအကျယ် အံ့အားသင့်သွားစေပါသည်။
“ယောက်ျားတွေဟာ မိန်းမတွေကို ရည်ရွယ်ချက် သုံးခုနဲ့ လက်ထပ်ကြတယ်။ ၁။ အရွယ်ရောက်ပြီး ယောက်ျားတိုင်း တပ်မက်တဲ့ သာယာမှု စည်းစိမ်အတွက် ၂။ သူတို့ကို ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ် ပြုစုဖို့နဲ့ ၃။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပေးဖို့….”
အိုး… အင်မတန် အတ္တကြီးလွန်းတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ အတွေးအခေါ်ပါလား….လို့ မှတ်ချက်ချမိလိုက်ပါသည်။
တကယ်တန်း လက်တွေ့ဘဝမှာ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုဆိုတာ ယောက်ျားတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း ဆိုတာတွေထက် အများကြီး ပိုတယ်ဆိုတာ မသိသေးတဲ့ အမျိုးကောင်းသားတွေအတွက် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါသည်။
အဒေါ်တစ်ယောက် မိသားစုစီးပွားရေးအတွက် အိမ်ထောင်ဦးစီးနဲ့ ဒိုးတူဘောင်ဘက်
စီးပွားရှာခဲ့သလို အိမ်ရဲ့ ဝေယျဝစ္စတွေကိုလဲ မလစ်ဟင်းစေအောင် လုပ်နေခဲ့တာကို
ပေါက်ဆိန်ကိုင်ပြီး ထင်းခွဲနေတာကို အပြစ်မဆိုခဲ့ပေမယ့် မိန်းမသားတန်မဲ့
အိမ်ထုတ်တန်းပေါ်တက်ပြီး ဓနိမိုးနေတာကိုမြင်တော့ မနေနိုင်လွန်းစွာ တားမြစ်မိပါသည်။
“အိုး... အန်တီရယ် ဒီအလုပ်တွေ
အန်တီလုပ်စရာကို မလိုပါဘူး ဦးဦးလာမှ လုပ်ပါစေ…”
သူ့တာဝန် ငါ့တာဝန် သူ့အလုပ် ကိုယ့်အလုပ်ရယ်လို့ ခွဲလို့မရတော့ဘူးလေ တူမကြီးရယ်....
သူမအားလို့ မလုပ်နိုင်တာကို အားတဲ့ အချိန်အထိ ထိုင်စောင့်နေမယ့်အစား
ကိုယ်ထလုပ်လိုက်တော့ အလုပ်တစ်ခု ပြီးသွားရော မဟုတ်လား....”
တန်းတူ အခွင့်အရေးပေးပါလို့ တောင်းဆိုနေသူတွေထက် အမျိုးသားတွေနဲ့ တန်းတူ ဘဝကို ရုန်းကန်နေသူတွေက
ဖိုနဲ့မ မတူညီတဲ့ သဘာဝနှစ်ခုကြားမှာ ညှိနှိုင်းလို့မရတဲ့ ကွာဟမှုတွေ အတောမသတ် နိုင်အောင် များပြားနေခဲ့ပေမယ့်
ဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်းကျောင်းပဲ့ကိုင်နေသူတွေဟာ ကျွန်မတို့ မိန်းမသားတွေပါရှင့်လို့
သိပင်သိသော်လည်း စာအုပ်ကို ဆက်မဖတ်ချင်တော့အောင် စိတ်ဓါတ်ကျသွားမိတာမို့ လက်ကိုင်ဖုန်းကို ကောက်ယူပြီး လူမှုရေး စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ နောက်ဆုံး စက်ရပ်သတင်းတွေကို ရှာဖွေလိုက်မိပါသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံက ဆေးကျောင်းသူလေးတစ်ယောက် အကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ သတင်းနဲ့ ကျောင်းသူလေးရဲ့ ဓါတ်ပုံလေးကို စိတ်မကောင်းစရာ ထပ်တွေ့ရပြန်ပါသည်။ ၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးက အမျိုးသမီးထုကို တုန်လှုပ်စေတဲ့ သတင်းလေးက နှစ်သစ်ရောက်တဲ့အထိ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ နေရာယူနေဆဲ။ သူကလေးရဲ့ သတင်းလေးက ကျွန်မဖတ်ဖူးသမျှ သတင်းတွေထဲမှာ ရင်ထုမနာ ဖြစ်ရသလို ထိတ်လန့်ကြေကွဲလွန်းစွာ နာကျင်ရတဲ့ သတင်းလေးတစ်ပုဒ်လဲ ဖြစ်ပါသည်။
အသက်နှစ်ဆယ်ကျော် အလှသွေးကြွယ်လွန်းတဲ့အချိန်မှာ ပညာတတ် အမျိုးကောင်းသမီးလေး တစ်ယောက် အသက်ရော အရှက်ပါ စတေးသွားရတဲ့ အဖြစ်ဆိုးကြီးက ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးက အမျိုးသမီးထု တစ်ရပ်လုံးရဲ့ လုံခြုံရေးကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်လေ။
“လောကမှာ ပညာတတ်တဲ့ မိန်းကလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပညာ မတတ်တဲ့ မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြူတဲ့ မိန်းကလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် မည်းတဲ့ မိန်းကလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် အကြမ်းဖက်သမားတွေ မျက်စိထဲမှာတော့ သာမာန် သားကောင် … သာမာန် မိန်းမ တစ်ယောက်ပါပဲ…. “ သူမရဲ့ အရှက်နဲ့ အသက် တစစီ ကြွေလွင့်ချိန်မှာ
ကျွန်မတို့ သင်ယူလိုက်ရတဲ့ သင်ခန်းစာ တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါသည်။
အဖြစ်က လူတိုင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ အဖြစ်။ မထူးဆန်းတဲ့ အဖြစ်တစ်ခု။ ထူးဆန်းသွားတာက ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ
ပါလာတဲ့ လူခြောက်ယောက်က သူမရဲ့ အဖော်ကို သေလာက်တဲ့အထိ ထိုးကြိတ်ပြီး သူမကို သားမယားအဖြစ်
ကျူးလွန်တဲ့ အဖြစ်။ ပိုလို့ ထူးဆန်းတာက အပြစ်မဲ့တဲ့ ဆေးကျောင်းသူလေးကို
ကိုယ်တွင်း အဂါင်္အစိတ်အပိုင်းတွေပါ ထွက်ကျစေတဲ့အထိ တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်လို တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့
အပြင် ဝတ်လစ်စလစ်နဲ့ လမ်းပေါ်မှာ ပစ်ထားခဲ့တဲ့ အမျိုးသားခြောက်ယောက်ရဲ့ ယုတ်မာမှုပဲ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံက ဆေးရုံပေါ်မှာ နှစ်ပတ်လောက်သာ အသက်ရှင်ခွင့်ရခဲ့သည်။ဆေးရုံပေါ်မှာ
ရှိနေခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်လုံးလုံး ကိုမာရပြီး သတိလစ်မိန်းမောနေခဲ့ပေမယ့် သတိရလာတဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ
နာနာကျင်ကျင် ငိုကြွေးခဲ့ရှာတဲ့ သူမရဲ့ ကိုယ်ရော စိတ်ပါ နာကျင် ခံစားရမှုတွေကို ဘယ်သူတွေများ
ထပ်တူခံစားပေးနိုင်မလဲ။ သူမကို မွေးခဲ့တဲ့ မိခင်နဲ့ ဘဝတူ မိန်းမသားတွေသာ သူမရဲ့ နာကျင်မှုတွေကို
မဟာ ဖိုဝါဒကို လက်ကိုင်ထားကြတဲ့ အမျိုးကောင်းသားတွေအနေနဲ့
နှမသားချင်းစာနာစိတ်နဲ့ ဂရုဏာ သက်ကောင်း သက်နိုင်ပါသည်။
သို့ပေမယ့် သူမ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ အသက်
အရှက် သိက္ခာ သူမစတေးခဲ့ရတဲ့ နုပျိုမှုနဲ့ အိပ်မက်တွေ သူမခံစားခဲ့ရတဲ့ သေလုမြောပါးနာကျင်မှုတွေကို
ဘဝတူ မိန်းမသားတွေကသာ ထပ်တူခံစားလို့ရနိုင်သည်လေ။
တခါတလေတော့ မျက်လုံးမပါတဲ့ ချိန်ခွင်လျှာလို စောင်းချင်တဲ့ဘက်ကိုသာ သာသာထိုးထိုး
စောင်းတတ်တာမို့ မတရားမှုပေါ် မတရားမှုတွေ ဆင့်နေတာကိုလဲ အပြစ်မဆိုသာ။
ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောရရင် ကျွန်မတို့
မိန်းမသားတွေနဲ့ပက်သက်ရင် လူသိရှင်ကြား ဟိုးလေးတကြော်ကြော် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြတဲ့ အဓမ္မမှုတွေကိုသာ
အတိအလင်းကြေငြာကြတာမျိုး။ လူမသိသူမသိ စော်ကားခံခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်မျိုးကိုတော့ ဘယ်သူမှမသိလိုက်ကြ။
ကာယကံရှင်တစ်ယောက်သာ ကြိတ်မှိတ်ပြီး ဒူးနဲ့ မျက်ရည်သုတ်ရတာမျိုး။ မိန်းမသားဆိုတာ အရှက်နဲ့ လူလုပ်တာလေလို့
ခပ်ဟဟလေးပြော မပွင့်တပွင့်လေးပြုံး နာနာကျင်ကျင်နဲ့ ခံစား အပူရုပ်ဟန်လုပ်ရင်းနဲ့ လုံးပါးပါးခဲ့ရှာတဲ့
ဘဝတွေကို ကျွန်မတို့ မမြင်နိုင် မတွေ့နိုင် လက်လှမ်းမမီနိုင်ခဲ့။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ မုဒိန်းကောင်ရဲ့ သားကောင်ဖြစ်ရရှာတဲ့
မိန်းမသား အရေအတွက်ကလဲ တစ်နှစ်ကို အနည်းဆုံး သုံးသိန်းကနေ အများဆုံး ၁.၃ သန်းအထိရှိနေခဲ့ပြီ။ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့
အဓမ္မမှုတွေထဲမှာ လူမသိ သူမသိပျောက်သွားတဲ့ အမှုတွေက ရာခိုင်နှုန်းငါးဆယ်ကျော် ( တိတိကျကျပြောကြတာက ၅၄ ရာခိုင်နှုန်း)ဆိုတော့ မိန်းမသားတွေရဲ့ ဆုံးရှုံးမှု
နစ်နာမှုတွေက မျက်ရည်တွေကြားမှာ ဝိုးတဝါး ပျောက်သွားတတ်တာမျိုးလား။ “အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဘဝမှာ ရွေးစရာလမ်းကလဲ များများစားစား မရှိလှဘူး
။ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး တောင်းဆိုသူဖြစ်ရင်ဖြစ် မဟုတ်ရင်တော့ အမျိုးသမီးတွေ ခံစားနေရတဲ့
အရှုံးတွေအတွက် ထိထိခိုက်ခိုက် နာကျင်ခံစားသူပဲ ဖြစ်ရမယ်။”
သတိရလိုက်မိတော့ ကျွန်မက ဒုတိယ အမျိုးအစား အမျိုးသမီးတစ်ယောက် နေရာမှာသာ ရှိနေဆဲဆိုတာကို
နေရာတိုင်းမှာ မြင်နေတွေ့နေရပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာ အမျိုးသမီးတွေ တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ
ရခဲ့ပါသလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုသာ အကြိမ်ကြိမ် မေးခွန်းထုတ်မိနေခဲ့တာကို ကျွန်မကိုယ်တိုင်သာ
“ကျွန်မတို့ လမ်းထွက်တဲ့ အချိန်အခါနဲ့ ဝတ်ထားတဲ့ အဝတ်အစားကို
အပြစ်မဖွဲ့ပါနဲ့ မုဒိမ်းကောင်တွေကိုသာ အပြစ်တင်ပါ”
“အမျိုးသမီးတွေကို အမျိုးသားတွေနဲ့ တန်းတူ အခွင့်အရေးပေးပါ”
“ကလေးမလေးတွေက သူတို့ကို အလေးထားတာလိုချင်တယ် အမျိုးသမီးတွေက
“အမျိုးကောင်းသားတွေဟာ ဘယ်တော့မှ မုဒိန်းမှုကို မကျူးလွန်ကြပါဘူး”
“ကျွန်မက အမျိုးသမီးဝါဒကို လက်ကိုင်ထားတယ် အမျိုးသားတွေကိုတော့
“ကျွန်မလေ ဆံစကနေ ခြေဖျားအထိ လုံလုံခြုံခြုံ ဝတ်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်… ဒါပေမယ့် မုဒိန်းကောင်ရဲ့ သားကောင်
“ ငါ့အတွက် ထိုင်ခုံမရှိလို့ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး စာသင်ရတာ
ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ ငါ အမျိုးသားတွေနဲ့ တန်းတူ ထိုင်ပြီးစာသင်ခွင့်မရရင်နေပါစေ…အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ငါ့ကို ပညာသင်ခွင့်လေးတော့ပေးပါ။”
ကျွန်မတို့ မျက်စေ့ရှေ့မှာတင်ပဲ အမျိုးသမီး
အခွင့်အရေး တောင်းဆိုသံတွေ ကျယ်သည်ထက် ကျယ်လောင်လာခဲ့ပါသည်။အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးတိုက်ပွဲတွေ
ပြင်းထန်သည်ထက် ပိုပြီး ပြင်းထန်လာခဲ့ပါသည်။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံက မာလာလာဆိုတဲ့
ကျောင်းသူလေးက သူ့နိုင်ငံမှာ မိန်းကလေးတွေ ပညာသင်ကြားခွင့်ရဖို့ တောင်းဆိုတဲ့အတွက်
အကြမ်းဖက်သမားတွေက သေနတ်နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ သတင်းလေးက အေးချမ်းစွာ ပညာသင်ကြားခွင့်ရနေတဲ့
အစွန်းရောက် မဟာအမျိုးသားဝါဒီတွေ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခွင့်အလမ်းကို ဘယ်လို
ပိတ်ပင်ခဲ့သလဲဆိုတာကို မသိသူတွေ သိခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ရပြန်ပါသည်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးအနေနဲ့
ခြုံငုံကြည့်ပြန်တော့ တစ်ရွာတစ်ပုဒ်ဆန်း တစ်ကျောင်းတစ်ဂါထာ ဆိုသလို
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေက တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာ မတူညီပဲ ကွဲပြားနေတာ
ဒါကြောင့်လဲ နိုင်ငံတိုင်း လူမျိုးတိုင်း
နေရာတိုင်းမှာ အမျိုးသမီးတွေ ရဲရဲရင့်ရင့် ရှေ့တန်းကို ထွက်ပြီး အခွင့်အရေးတွေ တောင်းခဲ့ကြသည်။
ဒါပေမယ့် မျက်ကန်း မဟာအမျိုးသား ဝါဒီတွေကြားမှာ
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေ ထင်သလောက် အရာမထင်သေးတာတော့ သေချာပါသည်။ ခရီးနှင်ပင်နှင်သော်ငြား
ထင်သလောက် ခရီးမပေါက် လိုသလောက် ခရီးမရောက်သေးပါ။
ညလယ်ပိုင်းရောက်တဲ့အထိ စာအုပ်တစ်အုပ် သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့တူ တောင်စဉ်ရေမရတဲ့
အတွေးမျှင်တွေက ဆန့်တန်းလို့ မကုန်နိုင်ခဲ့။ နောက်ကျိတဲ့ နှလုံးအစုံနဲ့
အိပ်မောကျသွားချိန်မှာတော့ အိပ်မက်တစ်ခု မြင်မက်ခဲ့ပါသည်။
အိပ်မက်ထဲမှာတော့ ကျွန်မက ရွက်ကြွေတွေ
လွှမ်းနေတဲ့ မြေနီလမ်းလေးပေါ်မှာ တလှမ်းချင်းလှမ်းလို့… ကျွန်မရဲ့ ခြေထောက်အစုံမှာတော့ ယောက်ျားစီး ရာဘာဖိနပ်အဖြူရောင်လေးတစ်ရံ…….. လမ်းဘေးဝဲယာက သစ်ပင်ကြီးတွေကို မျှော်ကြည့်မိတော့လဲ
ရွက်ကြွေတွေက တဖွဲဖွဲ ကြွေလို့ပဲ မဆုံးနိုင်တော့……
ကျနော်ရယ် ကြယ်သောကြာရယ် စီးချင်းထိုးကြတယ်။
My Emotional Vision "သံသရာ ခရီးသွား "
ရေးချင်၍ရေးသည် ဖတ်လိုက ဖတ်နိုင်သည် written by passion. read at own's discretion.
Wet Shotcrete Laboratory Tests
Latest Activity on တေလေတို့ရဲ့မှတ်တမ်း
Brayden is nowamember of တေလေတို့ရဲ့မှတ်တမ်း